Goverana Yako Haiti Nyaya?
KUKURA KWEMAHARA. KUFAMBIRA MBERI.
Bioscience Vakapedza kudzidza
Haiti yakave nematambudziko ayo. Ehe, kurerutsa kukuru. Haiti ine mikana. Zvakare kurerutsa kukuru!
KuKwasans - kubva kuzwi reCreole rinoreva kukura - isu takazvipira kubatsira kusunungura simba uye simba revanhu veHaiti. Nyika ino yakanaka yechitsuwa haina kushomeka kwevanhu vakangwara, vanoshanda nesimba vari kuyedza kuti vagadzire hupenyu huri nani ivo, mhuri dzavo nenharaunda dzavanogara. Izvo zvinoshaikwa capital. Zvivakwa. Dzidzo. Nezveutano. Mukana. Izvo zvinhu zvinogonesa kubudirira kuwana traction.
Nekutsigira kwako, edu epamusoro-maitiro anoenderera mberi nekuvandudza ivhu. Kudyara mbeu. Kusimbisa maHaiti achibatsira maHaiti.
Kwasans haigone kuenderera nebasa rayo kubatsira kupa simba maHaiti achibatsira maHaiti pasina rutsigiro rukuru rwevanhu vane hanya senge iwe. Ndokumbirawo mubatsire kumutsidzira ino nyika yakanaka nevanhu vayo vane hunyanzvi uye vanoshamisa nekupa kune izvozvi nhasi.
Isu tinodada neKwasans kwenguva yakareba kusangana neYunivhesiti yeName Dame Haiti. Kutsigira aripo maHaiti masangano kwakakosha kune kwedu basa. Isu tinonzwa kuti maHaiti anokwanisa kwazvo kubatsira vanhu venyika nevanhukadzi.
Maitiro makuru eKwasans Foundation parizvino anosanganisira:
LYMPHATIC FILARIASIS (LF) CLINIC– KUKWIDZIRA KUKURUMIDZA!
Iyi kiriniki iri padyo nePort-au-Prince - iyo chete yakaita saiyo muHaiti - inoda zvikuru rutsigiro rwemari yekuenderera mberi nebasa ravo rakakosha.
Dzvanya kuti udzidze zvakawanda nezve kiriniki!
Ichiri kuvakwa, ichi chivakwa chinosimudzira mabhizimusi sesimba guru rekuchinja uye kukura muHaiti.
Dzidza nezveEmabhizimusi Center!
MuHaiti, nhabvu (nhabvu) inozivikanwa zvikuru. Kwasans FC inopa michina uye imwe rutsigiro rwevechidiki nhabvu zvirongwa muLéogâne, Haiti.
Dzvanya kuti udzidze zvakawanda nezveKwasans FC!
Kwasans Foundation isiri-purofiti, 501 (c) (3) philanthropic sangano. Iine pamusoro we zero, 100% yezvipo zvako enda kuvanhu veHaiti.
LF Clinic Mifananidzo
Chipatara St. Croix, Haiti
Yambiro - Tinonzwisisa mifananidzo iyi kunge yakajeka, tine hurombo kana ichiramba, asi nekuona kukanganiswa kwemamiriro aya kunodiwa kuratidza kuoma kwedambudziko muHaiti.
Tine shungu dzekuona kukura kwakasimba muzvinhu zvese zvehupenyu hweHaiti. Chinangwa chedu ndechekutsigira masangano eHaiti anounza rubatsiro kuvanhu veHaiti.
Sezvo isu tichitsigira bhizinesi, dzidzo, uye tekinoroji, vanhu veHaiti vachaona mimwe mikana yekuvandudza hupenyu hwavo nekudyara mune ravo ramangwana.
Vemabhizimusi vanozove nezviwanikwa zvekuwedzera mabhizinesi uye kubatsira mukuvandudza hupfumi.
Kutarisa padzidzo kunobatsira kushongedza vanhu nematurusi anodikanwa ekugadzira mikana iri nani.
MuChirangaridzo chaClarence "Earl" Carter
Earl aive akazvipira uye nechido kubatsira vanhu veHaiti kuburikidza nekubviswa kweLymphatic Filariasis uye kudzivirira kweIodine Deficiency Disorders. Kuedza kwake kwekuzvipira uye kusavimbika, kushumira neUngano yeThe Holy Cross muzita raKristu, kwakakanganisa hupenyu hwemamirioni uye nekwenyika.
Inzwa iye achigovana nezve Bon Sel Dayiti, fekitori yemunyu yatinotsigira muHaiti muvhidhiyo iyi (kutanga na01: 41).
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve maitirwo aungaita kurangarira kwaEarl, ndapota tinya pano
Ramba Uri PEDYO!
Ndokumbirawo mubatsire maKwasans kuunza hupfumi, hwemagariro, uye hutano kumutsidzira kuvanhu veHaiti. Nhanho yekutanga kuziva! Nyorera kuti ugamuchire zvinyowani pamwedzi nezve basa riri kuitika pasi pasi kupa simba vanhu veHaiti.